Porsche ga - eji teknụzụ obibi 3D mee akụkụ maka ụgbọ ala ya | Akụrụngwa n'efu
Oge nke a ọ bụ emeputa nke ogologo Porsche onye ka kwuputara na, mgbe ọtụtụ ule gachara, nkewa ahụ Omuma Porsche dị njikere ịmalite ịmepụta akụkụ maka ụgbọala ndị a ma ama nke ụlọ ọrụ German site na mbipụta 3D. Dị ka n'oge ndị ọzọ, anyị na-ekwu maka akụkụ ụfọdụ nke ọ dị mkpa iji rụpụta ọsọ ndị pere mpe ha agaghị enwe obere uru.
Dị ka Porsche mesiri ya obi ike, ngalaba ya na-ahụ maka ịnye akụkụ ọ bụla iji weghachite ụgbọ ala ndị ochie nke ika ahụ, taa na-arụ ọrụ n'ụzọ dị mfe, echiche bụ na ha nwere ngwaahịa ugbu a karịa iberibe 52.000Ọ bụrụ na otu n’ime ndị a adịkwaghị ma ọ bụ na ọnụọgụ ya na-ebelata, a na-arụzi ya ọzọ site na iji ngwaọrụ mbụ. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa imepụta ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke akụkụ nke akụkụ a, imepụta nwere ike ịchọ iji ngwaọrụ ndị ọhụrụ aga-arụ.
Porsche ejirila mbipụta 3D rụpụta akụkụ ndị na-anọchi anya ụgbọ ala egwuregwu ya
N'ihi na anyị na-ekwu okwu banyere okomoko ika, otu n'ime ya isi nsogbu bụ na-ekwe nkwa akụkụ ọ bụla mapụtara oge niile na ndị ahịa gị nwere ike ịchọ. Nke a abụwo oge ntụgharị nke Porsche Classic kpebiri ịmalite ịmalite ịnwale ihe usoro ntanetị 3D dị iche iche nwere ike ịnye mgbe ị na-arụpụta akụkụ na obere ogbe.
Mgbe ịlele usoro nhazi dị iche iche, ọ dị ka otu n'ime ihe kachasị mma bụ nhọrọ laser njikọ. N'ihi nsonaazụ ndị e nwetara na ụdị teknụzụ a kapịrị ọnụ, ụlọ ọrụ German amalitela imepụta ihe ruru asatọ maka klas ya site na mbipụta 3D. Dịka nkọwa zuru ezu, gwa gị na iberibe ajụjụ ahụ dị mee ígwè na alloy ma ọ bụ ozugbo nke plastik, nke eji usoro SLS ekwuru na mbu
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » Nkọwa 3D » Porsche ga-eji teknụzụ obibi 3D mee akụkụ maka ụgbọ ala ya